Portal:Cilmi Fallag - Gpedia, Your Encyclopedia
(waa "Cilmiga Xidigaha" ama Cilmi "Fallag")
Cilmi Fallag (ingiriis: Astronomy) sidoo kale loo yaqaano Cilmiga Xidigaha waa cilmiga barshada Meereyaasha, Xidigaha, dayaxaanta, Galaagsiyada iyo dhamaan Koon eeynu ku noolnahay.
Cilmi Fallaga waa qeeyb ka mid ah Sayniska oo si toos ah u sharaxa barshada Koonka.
Qofka aqoonta u leh Cilmi Falaga waxaa loo yaqaanaa Xidigisyahan (astronomer).
2009 :Sanaddii loo aqoonsadan cilmi falagga.
Macluumaad dheeraad ah Cilmi falagga...
bedel Maqaal bille
Sawir dhulka ha
Dhulka (ingiriis: Earth, Carabi: أرض) waa meereha sadexaad ee qoraxda u dhow ee Bahda Midaysay Qoraxdu. Waa meeraha ugu muga iyo miisaanka weeyn iyo midka shanaad ee ugu xajmiga weeyn sideedda meere eeBahda Qoraxdu Midaysay.
Dhulka waxa lagu naaneeysaa Meeraha Midabka Buluugan Meeraha Midabka Buluugan sababtoo ah marka hawoda sare laga soo fiirinayo waxa muuqda midabka buluuga.
Dhulka isku-wareegiisa (Circumference) waa 40,007.86 km marka laga xisaabayo dhul badheha, sidoo kale baaxada guud ee oogada dhulku waa 510,072,000 km2 - taas oo ka kooban 148,940,000 km2 "148,940,000 km2" dhul ama caro iyo dhagax ah una dhiganta 29.2 %; iyo 361,132,000 km2 biyo iyo bad ah, taas oo u dhiganta 70.8 %.
Sidoo kale, miisaanka cuf ee dhulku waa 5.515 g/cm3, "cufka dhulku waa 5.515 g/cm3" halka cufisjiidadka dhul badhehu yahay 9.780327 m/s2 taas oo u dhiganta 0.99732 g. Cadaadiska dunidan waa 101.325 kPa (MSL).
Portal:Cilmi Fallag/Meeraha Usbuuca
Portal:Cilmi Fallag/Sawir Xul Ah/3
bedel Ma ogtahay
Portal:Cilmi Fallag/Ma Ogtahay
Wararka cilmi falagga
Portal:Cilmi Fallag/Warar Cilmi Fallag
Portal:Cilmi Fallag/Dhacada Bisha
bedel Liiska mowduucyo culmu fallag
Bedel Laamaha cilmu fallagga
Portal:Cilmi Fallag/Maqaalo Dalban
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Cilmi_Fallag&oldid=126549"